Maxkamadda Guud ee Xarkada Mujaahidiinta Al-shabaab oo Shirkadda Amal ku xukuntay in ay daabacdo 70875 kitaab (Faah-faahin)+sawiro | Halganka Online
Maxkamadda Guud ee Xarkada Mujaahidiinta Al-shabaab oo Shirkadda Amal ku xukuntay in ay daabacdo 70875 kitaab (Faah-faahin)+sawiro
Posted on Abriil 10, 2010 by halganka
Maxkamadda guud ee Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab ayaa maanta waxay soo bandhigtay buug nooca Xasuus qorka ah oo ay soo daabacatay Shirkadda Xawaaladda ee Amal Bank kaasi oo ay ku qornaayeen waxyaabo ka dhan ah shareecada islaamka.
Qaadiga Maxkamadda guud ee Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab Sheekh C/dul Xaq oo maanta warbaahinta muqdisho shir saxaafadeed u qabtay ayaa ugu horayn waxa uu ka hadlay baaritaano ay ku wadeen buugaasi Anshax darada ah oo lagu Xayaysiinayay Ciido ay leeyihiin dadka Masiixiyiinta ah.
Sheekh C/dul Xaq oo warbaahinta Muqdisho kula hadlay ayaa faah faahiyay buugaas liddiga ku ah shareecada suuban ee islaamka iyo Akhlaaqiyaadka bulshada Muslimka ah .
“ waxaa wadanka soomaaliya lasoo geliyay buug leh Astaanka Shirkadda Xawaaladda Amal Bank laguna qeybiyay gudaha qeybo kamid ah wilaayaadka islaamiga ah,buugaagtaas oo gudahooda laga helay waxyaabo dhaawacaya Shareecada islaamka iyo damiirka qofka Muslimka ah,waxyaabahaas oo ay ka mid yihiin.
Waxyaabihii ku qoraa Buugii Amal faafisay oo muujinaya Acyaad gaalo
1-Faafinta Ciidadaha Kirishtanka,Ciidahaas oo tiradoodu gaarayso 35-ciid oo gaaladu ay leedahay iyadoo aan laga xusin ama laga sheegin labada Ciidood ee islaamku leeyahay.
2-kala qeyb qeybinta dalka iyo dadka soomaaliyeed,qeybna ay siiyeen Cadowga Alle subxaanahu watacaalaa Ugandheeska iyo buruundeeska qeyb ay siiyeen,qeybna ay siiyeen dowladaan ridada ,qeybna ay ku magacaabeen kuwan Mushrikiinta ah,qeybna ay ku magacaabeen Somali land iyo Puntland qeybna ay ku magacaabeen inay joogaan Mujaahidiinta oo marka loo fiiriyo qeybahaas kale nisbo aad u yar ah .
3- Hal ku dhigyo ay ku magacaabeen Xikmad oo ay leeyihiin yahuudda.
4-Sawiro aan Anshaxa ku fiicnayan .
Xukunka ay Maxkamaddu ku riday Shirkadda Amal Bank.
Alqaadi Sheekh C/dul Xaq ayaa ku dhawaaqay Xukunka ay Maxkamadda guud ee Mujaahidiinta Alshabaab ay ku riday Shirkadda Xawaaladda Amal Bank wuxuuna qaadigu sheegay in shirkadda lagu amray inay soo daabacdo kutubo diiniya oo gaaraya 70875 oo Kitaab.
Kutubadii ay Maxkamadda ku xukuntay in ay soo daabacdo shirkadda Amal Express
Maxkamddu waxay ku Xukuntay Shirkadda Amal Xukun Tacziir ah oo noqonaya Sidan.
Inay daabacdo Shirkad Amal Kutub dhan 70875 oo kitaab kuwaasi oo faah faafhintoodu ay ku qoran tahay warqadda ku lifaaqan Xukunka.
In la gubo buugaagtaasi wixii laga hayo .
In dib dalka aysan u keenin waxyaabaha noocaan oo kale ah .
Magacyada Kutubta la doonayo inay soo daabacdo Shirkadda Amal Bank.
1-Masaaxif Qur’aan ah Cadadka laga doonayana waa 5000 oo kitaab.
2-Kitaabka la yiraahdo Xisnul Muslim Cadadka laga doonaya waa 5000 oo kitaab.
3-Kitaabka Mashaaricul Al-Ashwaaq Cadadka laga doonayo waa 25 Kitaab.
4 -Jaamicul Culuum Wal Xikam Cadadka laga doonayo waa 20,0oo kitaab.
5-Arbaciinul An-nabawi Cadadka laga doonayo waa 3000 oo kitaab.
6-Riyaadul Saalixiin Cadadka laga doonayo waa 200 oo kitaab.
7-Islaaxul Mujtamac Cadadka laga doonayo waa 2000 oo kitaab.
Dhanka kale wariyaashii ka qeyb galay Shirka jaraa’id ee uu qabtay Qaadiga Maxkamadda guud ee Shabaabul Mujaahidiin oo la tusiyay buuga ay soo daabacatay Shirkadda Xawaaladda Amal Bank ayaa sheegay in buuga Midibkiisu uu ahaa mid madow ah oo ay ku qornaayeen 35-Ciidood oo ay leeyihiin dadka Masiixiyiinta iyo sawiro Anshax daro ah oo aan ku wanaagsanayn Akhlaaqiyaadka islaamiga ah ee bulshada soomaaliyeed.
Waxaana Ciidaha ay leeyihiin dadka Masiixiyiinta ah ee buugaas ku qornaa kamid ah maalinta Jacaylka,Maalinta Aabaha,Maalinta Qaramada Midoobay iyo Maalmo kale
« Maleeshiyaadka Kooxda Riddada oo Isbaarooyin soo dhigtay agagaarka Kuliyadda Jaalle Siyaad ee magaalada Muqdisho. Ganacsatada degmada Walaweyn oo balan qaaday in ay bixinayaan Hubka iyo dhaqaalaha kale ee ku baxaya Ciidanka Xisbada Wilaayada »
Naseex, on Oktoobar 31, 2011 at 8:54 g said:
Buracad baad tihiin, umadda ilaahay diinta ku diraya. Ee alle ka cabsada oo ummadda dilka iyo dhibka ka daaya.